Nzira Yokuwana Sei Vazhinji Vateereri? - Semalt Inoratidza Zvakavanzika ZveZvaMedia Media
Kune chero bhizinesi rekutsvaga, kuwedzera nhamba yevateveri vako nderokudzorera.Vanhu vazhinji vanogadzira e-commerce webhusaiti yepaiti vanoda kuwana zvakanakisisa kubva pamabasa avo, uye saka vanosarudza paIndaneti marketing channels. Kutengeswa kwepaIndaneti kunosanganisira nzira dzedhijita dzakadai seSearch Engine Optimization (SEO) uye Social Media Marketing(SMM) - in value of a boat. Aya maitiro akasiyana, asi zvose zvinotarisirwa pakuunza vashanyi pasuo rako remukova. Nhau dzezvemagariro ehupfumi dzakadai sa Facebook ineiri kutevera vanosvika 2billion vashandi pasi rose.
Kana munhu achiona zviri mumutauro, chirongwa cheAIRC chinoitika. Ichi chinoitika ndechokuti zvinyorwa zvinowanikwa pane SERP, zvinotarirwa kushandiswa kwekutarisa zvakananga. Iwe webhusaiti yako inofanira kuvakukwanisa kuita basa iri kana kuti zviitiko zvehupfumi zvisingashande. Sezvakataurwa pamusoro apa, SEO ne SMM inounza vashanyi panzvimbo yako, iyoinomiririra chitoro chenyama. Kana uchinge wava nevashanyi, iyo ibasa rewebsite yako yekushandura vatenzi ava kune vatengi.
Ivan Konovalov, Mutungamiriri weKuteresi Achibudirira we Semalt Digital Services, inopa mazano anokosha pamusoro pokuti ungaongorora sei social network analytics.
Ita vateereri vako
Munzanga yehupfumi, zvose ndezvevateveri. Chero chero chikwata chaunosarudza, chirimutambo wemanani. Iyo yakakwirira nhamba yevateveri vari nani mamiriro ekutengeserana kwako muIndaneti. Somuenzaniso, Facebookuye Twitter inogona kukubatsira kuti uwedzere nhamba iyi kuburikidza nekugovana ruzivo, runyararo uye nekusika michina yemhando..Zvimwe zvinokonzera mhete dzemaoko akadai sezvo kubhadharwa zvinotevera zvinogona kunge zvisingarevi zvakanyanya kune e-commerce yako kubudirira. Chero zvazvingava, iwe unotengesa chikwereti mukunyoresa paGoogle SERPs.
Zvisinei, kuwana zvakasimba mushure mekugara mune zvemagariro hakusi basa rakaoma. Toolskufanana neKlout inogona kukubatsira kuwana mifananidzo yehupenyu hwako. Vanoyera kutarisana kwehutano pamwe nekukuratidzirai zvinyorwa zviri kutsika.
Sezvakangoita SEO yakasununguka, hutano hwakanaka hunosanganisira kushandiswa kwevamwe specially selected keywords to help you rank. Yeuka, boka rekutsvaga rehupfumi rehupfumi rinofanana neyekutsvaga injini yekutsvaga. Uyezve,izvo zviri mumasangano ezvehupfumi zviri nhamba yevanjini. Mazwi enyu ezvinyorwa uye zvigadziro pamapurandomu ezvehupfumi sezvakaita Facebook kuonekwa paneSERP sezvinongoita mapeji ewebhu.
Social media network sezvakaita Facebook ne Twitter vane nzvimbo yakanaka yekuitainotsvaga paIndaneti. Chinhu chakanaka ndechokuti, nekutengesa zvikwereti, unogona kuderedza zvakananga kune vanhu vane ruzivo rwakadaro. Using zvishandiso zvinokosha, unogona kutevedzera vateveri vachishandisa mazita enyu emaimeri zvino uye kusvika kune zvitsva. Zvemagariro ehupfenyuro anotevera achishandisa zvizivoinogona kuita kuti e-commerce yako irambe ichibudirira.
Mukutengeserana kwema digital, social media ndeimwe yepamusoro yekutengesa kweInternetmapuratifomu. Nhau dzezvemagariro evanhu dzinokwanisa kukwanisa kusvika mamiriyoni evashandisi pasi rose. Nokudaro, webhusaiti yako inogona kuwana pasi rose rinotevera pane vanopfuura mamiriyoni vanyori. Dambudziko reizvi nderokuti ungaita sei Social Media Marketing pachayo. Chikamu chemhinduro yeizvi chinosanganisiramazano munyaya ino. Iwe unogona kukwanisa kushandisa nhepfenyuro yehuwandu hwehuwandu hwemashoko uye unoita kugadziriswa kwakakodzera kukutengeserana kwako kwepaIndaneti kurwisa. Aya mazano anobatsirawo SEO yako kuburikidza nekuita iwe webhusaiti yako yakakwirira pamusoro peSERPs.